डिभी के हो, कसरी पर्छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
डिभी के हो, कसरी पर्छ ? हेर्नुस
अमेरिकाले हरेक वर्ष हजारौँलाई डाइभर्सिटी भिसा चिठ्ठा अन्तर्गत विभन्न मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउँदै आएको छ ।
नेपालीसहित विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकले अमेरिका जानका लागि हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइनबाट डाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डिभी चिठ्ठा भर्दै आएका छन् ।
अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा विश्वका विभिन्न मुलुकका मानिसलाई भित्र्याउनका लागि डिभी चिठ्ठा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
खासमा अमेरिकातर्फ कम आप्रवासन दर भएका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका भित्र्याउनका लागि डिभी कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो । यसअनुसार हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट १ लाख आवेदकलाई दामाशाहीबाट छान्ने गरिन्छ भने ५० हजारलाई ग्रीनकार्ड दिइने प्राबधान छ । डिभी चिठ्ठा दामाशाहीबाट छानिने भएकाले डिभी पर्ने नपर्ने निश्चित भने हुँदैन ।
डिभी चिठ्ठा आवेदन भरेको निश्चित समयपछि अमेरिकाको विदेशमन्त्रालयले चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक गर्दछ । डिभी भर्ने बेला दिइएको कन्फरमेसन कोडको माध्यमबाट डिभी चिठ्ठा परे/नपरेको निश्चित हुन्छ । यसकारण कन्फरमेसन कोड बिर्सिनु हुँदैन ।
अहिले राति पाैने १० बजे डीभीको आवेदन खुल्दै (फारम भर्ने लिंकसहित)
नेपाली समयअनुसार अहिले (बुधबार) राति पौने १० बजेबाट डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का लागि आवेदन खुल्दै छ।
नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासका अनुसार यसको समय सीमा २०७७ कात्तिक (नोभेम्बर १०) सम्म तोकिएको छ।
डीभीको आवेदन निःशुल्क आफैंले भर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दूतावासको वेबसाइटमा हेर्न सकिने छ।
डीभीकाे फारम http://www.dvlottery.state.gov वेबसाइटमा गएर भर्न सकिने दूतावासले जानकारी दिएकाे छ।
डीभी आवेदन भर्न कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन दूतावासले आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं, असोज १४ आज (बुधबार) देखि शुक्रबारसम्म देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले बुधबार बिहान ६ बजे जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनअनुसार यी तीन दिन मध्यम वा भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छैन। यस्तो छ तीन दिनको अनुमान असोज १४ गते बुधबार दिउँसो : प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, […]
आज २०७७ असोज २२ गते विहिबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस